Anyanwụ Installer ahịa Strategic maka Beginners - Kimroy Bailey Group
Anyanwụ Installer ahịa Strategic maka Beginners
Renewable Energy, Apụta
Kekọrịta ndị a site na KB Group na ndị enyị gị
Yabụ ị nwere echiche dị ebube maka ime ezigbo ego site na ụlọ ọrụ anyanwụ na-arụ ọrụ ruru ijeri dollar ijeri ma ị nweghị ndị ahịa mbụ. Ebee ka ibido? Kedu ihe i kwuru? Kedụ ka ị ga-esi kwenye onye nwe ụlọ ịtụkwasị gị obi ịgbakwunye ike anyanwụ na ụlọ ha ma karịakwa na ego ha? Ọ bụrụ n’inweghị azịza nye ajụjụ ndị a, ihe a ị ga-eme bụ ịdebere ihe ntanetị nke anyanwụ a ka ọ dị Larkwụ na larkwụ Solar Nkuzi Ọzụzụ nwụnye!
Emegogola m ahịa dị mma maka ịbanye ngwa ahịa anyanwụ mgbe m na-eto azụmaahịa ntinye anyanwụ na Kimroy Bailey Renewables na enwere m obi ụtọ ịkekọrịta atụmatụ na aghụghọ m. Ekwesịrị m ikwu na ọtụtụ atụmatụ ahịa m bụ ihe ngosipụta dara mana ụzọ abụọ dị iche iche siri nweta nsonaazụ dị mma. N'isiokwu a, m ga-ekekọrịta ndụmọdụ abụọ ahụ maka ịre ahịa ngwa ahịa rụrụ ọrụ m ga-ekwu banyere otu na-emeghị :).
Nke mbu, tupu iga n'ihu mee ka m kwuo, isiokwu a agaghị agwa gị ka ị kpọsaanụ na Facebook, YouTube, Akwụkwọ akụkọ, TV ma ọ bụ Redio. Nke a bụ ntuziaka njem nrụpụta nke anyanwụ iji bulie gị site na efu ka ọ bụrụ dike na mpaghara gị. Nke abuo, nke a abughi ihe ndozi karie, nweta ngwa ngwa ngwa ngwa na edemede edemede ma obu ya. Ndụmọdụ abụọ a dị mfe ma dị omimi ga-ewe gị oge iji gbanwee onye ahịa gị mana mgbe ị na-eme ya ga-enyere gị aka ịme ngwa ngwa ma nọgide na-enweta ego ntanetị na ngwa ahịa ntinye anyanwụ.
Mbara Anyanwụ Installer ahịa Strategic # 1: Bụrụ onye mbụ na-azụ ahịa gị & Nweta Solar Barbeque!
Wụnye obere sistemụ ikuku n'ụlọ gị dị ka usoro ihe omume maka ndị ahịa gị n'ọdịnihu. Kwesighi imebi ụlọ akụ iji mee ka nke a mee, na U $ 2,000 ị nwere ike ịmepụta ntọala ntụkwasị obi nke anyanwụ iji gbanye friji gị, ọkụ ọkụ ọkụ, Laptọọpụ, TV na obere elektrọnik ọzọ dị n'ụlọ gị. Isiokwu a nyere gị 5 ndụmọdụ dị mfe iji wụnye sistemu nke ikuku maka n'okpuru $ 3,000. Ebumnuche nke usoro a abụghị ịhapụ ụlọ gị kama ọ bụ igosipụta na ike anyanwụ na-arụ ọrụ. Ọ nwekwara uru ọzọ agbakwunyere ịchekwa ego na ụgwọ ọkụ kwa ọnwa. Akụkụ kacha mma bụ uru abaghị uru nke oghere ịre ahịa ga-eme ka ị nwee nnukwu ego, yana ezumike Guinea nke ga - enyere gị aka ịghọta ụfọdụ n'ime ike anyanwụ iji nwee ike ijere ndị ahịa gị ozi.
Pịa ịkwụ ụgwọ nkwụghachi 54% gị na thekwụ na bykwụ site na Nzọụkwụ Ọkụ Mbara Ntanye Ntinye
Mgbe ị wụnyechara sistemụ ike anyanwụ gị site na enyemaka nke Nzọụkwụ site na Nzọụkwụ Ọkụ Mbara Igwe Solar Training ahụ wee bụrụ akụkụ ntụrụndụ, na-agwa ndị ọzọ banyere sistemụ anyanwụ gị na ịnweta ndị ahịa mbụ gị. Mgbe m tinyechara usoro ezumike m n'ụlọ nne na nna m (ebe m bi mgbe ahụ) achọpụtara m ụzọ dị omimi iji na-agwa ndị ọzọ banyere ntinye m. You nwere ike nọrọ n'ụlọ ahịa ụbọchị oriri, ezumike, izu ụka, ma ọ bụ ihe ọ bụla ị ga - eme ka ịkpọta ndị enyi gị, ndị agbata obi gị na ndị ị chere nwere ike ịmasị ịghọta otu ike anyanwụ si arụ ọrụ. Ndị mmadụ hụrụ nri n'anya na nri n'efu.
Otu ihe dị mfe nghọta iji mee ka ị hụba sistemụ gị n’etinyeghị aka bụ ime ka ihe ntụrụndụ TV na Sistemụ Egwu nọ n’ebe obibi na-eji sistemu na mbara igwe. Ọ na-arata onye mbido mkparịta ụka dị mfe. Ebumnuche gị abụghị ire kama ịkọwapụta eziokwu nke otu sistemụ anwụ a si arụ ọrụ nke ọma. Ikwu okwu banyere ego echekwara gi na ulo oru ike gi na asambodo ohuru a choputara site na Larkwụ na larkwụ Solar iji lebara ‘isi ọwụwa’ nke nwụnye anwụ anwụ maka ndị enyi gị.
Nye ha kaadị azụmaahịa gị ma kwe nkwa ịme nke a free nyocha nke ike anyanwụ. Nyochaa anyanwụ bụ usoro iji nyochaa ụlọ mmadụ iji hụ uru nke ike anyanwụ dị, ego ole ha ga-echekwa, ego ole ọ ga-eri, nhọrọ ịkwụ ụgwọ wdg. Nke a ga-eduzi ha maka ịnwe ike zuru oke nke anyanwụ ma ọ bụ inweta usoro mbido anyanwụ dị ka nke gị ma ghọọ onye na-agbanwe ahịa. Converttụgharị onye ahịa bụ mgbe ị na-eme nyocha nke anyanwụ ma nye ndị ahịa otu ohotara ma onye ahịa ahụ kpebiri iji ọrụ gị.
Atụmatụ ire ọkụ Slot Installer Trade # 2: Nye Gbanyụọ Ntanetị Ike
Yabụ na barbeque gị bụ ihe ịga nke ọma, nwunye gị na-emere ụfọdụ kuki mara mma, ndị otu ọkacha mmasị gị meriri egwuregwu a ma nwee mmasị na ndị ọbịa ị mebere anyanwụ gị na atụmatụ ire ịwụnye anyanwụ ị na-enwe. Ugbu a bụ oge ịgbaso ndị nwere mmasị 5-10 nke kwuru na ha ga-achọ ka ị lelee ụlọ ha ma nye ha ego iji wụnye anyanwụ na ihe ha. A na-akpọ ndị a ndị isi ahịa, ndị na-azụ ahịa bụ kọntaktị ahịa ahịa, mmadụ na-egosipụta mmasị na ọrụ nrụnye nke anyanwụ gị.
Iji hụ na usoro ahịa dị ka enweghị mgbagha ọ bụla enwere ike, biko gbaa mbọ hụ na ị na-enye ntule ume ọrụ n'efu. Ee, ama m na ikwesiri ịkwụsị ihe ị ga - eme, ịbanye n'ụlọ ha, nye oge gị na ihe ọmụma gị niile na - akwụ ụgwọ na onye a nwere ike ma ọ bụ ghara iji ọrụ gị ka ị weghachite mmefu ndị a. mgbe ha kwụrụ gị ụgwọ maka ọrụ anyanwụ. Mana tukwasim obi, o siri ike inweta mbu mbu ahia gi. Ekpebirila m ụzọ nke ọma mgbe m na-eto Kimroy Bailey Renewables. Anọgidere m na-anwa iwepụta $ 100 site na ụgwọ nyocha Solar Energy anyị ma n'aka nke ya wee tufuo $ 10,000.
Ọ kachasị mma ịnweta ụkwụ n'ime ọnụ ụzọ (n'ụzọ nkịtị), karịa iguzo n'èzí n'ihi na ịchọrọ $ 100 ka ị banye n'ọnụ ụzọ. A na-akpọ ụgwọ nkwụghachi ụgwọ anyanwụ $ 100 nke izu ahịa. Enwere ike ịkọwa esemokwu nke ire ahịa dịka iguzogide mmụọ maka akụkụ nke usoro ịre ahịa anyanwụ gị. Ọ bụ ezie na ịnwere ike igosipụta ebubo a dị ka ụzọ isi kpuchie mmefu gị iji nyochaa nyocha nke anyanwụ, onye ahịa ahụ na-eche "gịnị kpatara m ji akwụ gị ụgwọ iji kwụọ gị ụgwọ." Kpee echiche ịzụta ice cream ma onye nwe ya guzo n'ọnụ ụzọ ma bo gị ebubo maka na ọ ga-eme ka ice cream dị ọcha ma dabere na ya na friza dị oke ọnụ. You na-akwụghachi ya n'ọnụ ụzọ iji mee ka ice cream dị jụụ ma ị banye, kwụọ onye na-akwụ ụgwọ maka ice cream. Basically buru ya ugwo iji kwụọ ya. Ka o sina dị, tupu m na-emegharị onwe m na akụrụngwa a na-achịkwa isi mkpịsị aka m bụ nke a; Ekwụkwala ụgwọ maka nyocha anyanwụ ruo mgbe ịbunyela opekata mpe gasị sistemụ 20.
Kedu ihe kpatara ichere ruo mgbe ị rụnyere sistemụ igwe iri abụọ?
Ka ọ dị ugbu a ihe abụọ ga-eme, you ga-ewu ewu nke ga-eme ka ndị mmadụ kpọọ gị juo gị ka ị mee nyocha nke anyanwụ. Iji mata etu nsogbu ndị ahịa ndị ahụ siri dị, ị nwere ike itinye obere ụgwọ maka ọrụ nyocha anyanwụ. Nke abuo, inwere ike inweta otutu oku maka nyocha nke anyanwụ nke na ọ ga - amalite ịgbakwunye ma metụta akara ala gị ọ gwụla ma are na - agbanwe 30% nke nyocha ndị ahụ ma ọ bụ ịchọta ụzọ ọzọ iji kpuchie ọnụ ahịa metụtara ịnweta otu onye otu ịme ihe a. nyocha anyanwụ ma kwadebe ihe ndị ahụ.
Mmechi Mbara Anyanwụ nke ire
Otu ngwa ngwa ịcheta bụ na enweghị mgbagha ahịa n’inye ndị nwe ụlọ nyocha anyanwụ dị n ’n'efu, ha ga-anabata onyinye mmesapụ aka a n’egbughị oge. You mechaa nyocha nke anwụ dị, ị ga --ekwu okwu ma kwuo n'echere ka ha nyere gị oku, ị wee nweta ọrụ ahụ. Ma ọ bụrụ n’inye gị ego mmadụ maka inyocha anyanwụ, ọ bụghịzị onyinye ma ọ bụụrụ ọrịre. Cheta uru gị dị na nyocha nke anwụ, ọ dị na nrụnye nke anyanwụ ma ịchọrọ nyocha iji nweta nrụnye.
Ọ bụrụ n’ịghaa ihe ndị bụ isi na ị nweela ndị ahịa anyanwụ dị n’okpuru n’ belt gị ma nwee ike ịbawanye ọnụ ọgụgụ ndị ahịa ị nwere ike gụọ edemede anyị na-esote maka iwulite alaeze ukwu nke anyanwụ gị. Edemede a ga-enye usoro nkawa nke maka ịbanye n’igwe n’eluigwe.
Daalụ nke ukwuu maka iwepụta oge iji gụọ akụkọ a. Enwere m olile anya na ị hụrụ ya agụmakwụkwọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka anyị banye n’oghere nke mpaghara nrụnye nke anyanwụ ị nwere ike ịdebanye aha maka Nnwale Ọnwụnwa nke Larkwụ na larkwụ Solar Nkuzi Ọzụzụ nwụnye. Biko nweere onwe gị itinye nkọwa gị ma ọ bụ ajụjụ gị n’okpuru isiokwu a. Nke a bụ #TeamKB Ka anyị #KeepBelieving
Kimroy Bailey bụ onye nwe Milbillionaire nke Trott Bailey Family Group of Company na ndị enyemaka niile. Ya onwe ya bu Sher Trott Bailey's hubby na daddy ndi isi Keilah Trott Bailey. Linezọ kachasị amasị ya bụ #TeamKB, #KeepBelieving
5 Atụmatụ iji belata ụgwọ ọkụ ọnwa gị site na 20%
Tweet Nke a post ga - ewetara usoro dị mma maka nsogbu ike ike Jamaica ma chọọ ka ndị Jamaic kwụsị ịtụ aka na ... GỤKWUO
Ọhụụ nke Onye Ochichi nke Minista 2013
Na Tọzdee Eprel 18, 2013, e mere nzukọ izizi ihe banyere mba mbụ na Alfred Sangster Auditorium na Mahadum… GỤKWUO
Ihe Nlere Anya Maka Jamaica
Kimroy Bailey na Jamaica Renewable Energy Expo nke e mere na Jamaica Pegasus 2013 Mọnde, Eprel 15, 2013 gbadara… GỤKWUO
Onye natara: Mịnịsta ala nke nturu ugo nke mba n’iru
Ndi Kachasị Ekele Kimroy Bailey nyere ya. Portia Simpson-Miller maka mmezu nke mba ụwa na ntanetị nke 2013 nke… GỤKWUO
Kimroy Bailey Foundation: akingwepu Basiclọ Akwụkwọ Nleta Grid
Asambodo Ntinye Aka Na Ntanetị Na -adịghị Uru Uru Kimroy Bailey Foundation na-akwado ịkwalite itinye ike n'ọrụ site na ịwụnye ikuku ... GỤKWUO
Green, Ulo Ogwughari
Site na ọnọdụ akụ na ụba anyị onwe anyị dị ka ndị Jamaic na-enwe kwa ụbọchị, ọ dị mma mgbe niile ịchọta ụzọ ... GỤKWUO
08Ka Nwere ike 8, 2013
Okporo ụzọ ikuku na-enwu n'okporo ụzọ
Wind Turbine Powered Highway lamp, echiche nke TAK Studio #TeamKB, Nke a bụ ihe ohuru ohuru dị mma na ihe ọzọ kpatara #KeepBelieving ... GỤKWUO
Anyanwụ Panel nwụnye DIY Tutorial!
Vidiyo a bụ nke mbụ n’usoro anyị na nkuzi DIY na-akụzi na anwụnye klọọkụ dị na sineti ... GỤKWUO
Gbanyụọ GRID ikuku na ntinye anyanwụ na ọnụ ahịa ya
Ndewo #TeamKB, na edemede a Kimroy Bailey Renewables ga-egosi gị usoro ise dị mfe iji wụnye mmebe gị ... GỤKWUO
Ike ikuku iji ike 60% nke agwaetiti Grenada kachasị ukwuu
Agwaetiti Grenada bụ ebe obibi na-ekwu na ike ọkụ eletrik kachasị elu na Caribbean na ọnụego US ₵ 60 / ... GỤKWUO
Njem Mahadum m
Inyocha nkwuwa okwu
Nkebi nke 1 Nzọụkwụ Mbara Igwe Solar Panel Ntinye Ọzụzụ Maka Ndị Malitere
Nwoke Nwere Ike Ikuku? Etu Ozo Robotic Na - emebisi ulo oru mmanu
3D Printer 100% 100% Emegharia Jamaica Blogger Blogger nke afọ 2012 nturu ugo Bailey ụgwọ ike nke caribian oké osimiri caribian na ike imeghari Community Conservation ike dị iche iche na isi iyi nke caribian Energy nchekwa ume Mmata gburugburu ebe obibi Foundation Inweta mmeri Jamaica Energygwọ ume ike Jamaica Akara Jamaica Nsogbu ike nke Jamaica Mbubata mmanụ na Jamaica Jamaica Onye Ọrụ Ọha Kimroy Kimroy Bailey Kimroy Bailey Foundation ugbo ugbo wepụ okporo Nwa ndi Prime Minister ndi ntorobịa Nenen Renenwable Emeghari ohuru Ike imeghari ohuru Renewablle Jamaica robotics Ajụjụ ọnụ ọchị na Jamaica anyanwụ anyanwụ ike mbara igwe esiwe Otu Kimroy Bailey Foundation Mahadum Nkuzi nke Mahadum Utech Robotics otu ifufe Ike ikuku ikuku windo ifufe turbines